Ma is Leedahay Soomaliya Oo u sii Socota Meeshii hore oo ay ka timid mar hore:- (Akhriso) – hareerley
Ma is Leedahay Soomaliya Oo u sii Socota Meeshii hore oo ay ka timid mar hore:- (Akhriso)
June 13, 2019 Daadir	0 Comments
Soomaliya ayaa Sida Saadaashu tahay kusocota meeshii ay ka timid waa 1991kii dagaaladii sokeeye ee ku habsadey markaasi halkaas Oo ah god dheer Oo aad u Qaraar.
Wadanka ayaa ah mid Amni xumo ragaadisey in mudo ah Oo ay Ururka Al Shabaab la dagaalamayeen dowladihii wadanka soo marey ha ahaadaane kuwii ku meelgaar ahaa iyo kuwa haatan jogaba.
Shacabka ayaa waxa ay ku haminayeen in Wadanka xaaladiisu isbadasho laguna talaabsado xaalad wanaagsan lana soo afjaro dagaalada argagixisadu ku hayaan shacabka masaakiinta ah talaabo wanaagsana hore loo sii qaado marwalba.
Hadase hadaad dib u jaleecdo wixii ka dhacay Beledweyne waxaa dareemeysaa in rajadii Shacabka qabey halkaasi ka sii baxayso,hadaad jaleecdo dhanka Galmudug iyaduna waa saansaan aanan wanaagsaneyn sidoo kale jubaland kaba sii daran su’aashuse waxay tahay Xagee loo socdaa?
Waa caadi ah taasi waa waxa qofwaliba Oo soomaali ah madaxiisa ka dhex guuxaya waxaase qofwaliba ku filan waxaa uu marqaatiga ka yahay oo uu jeedo.
Waxaan hadalkeeyga ku soo gunaanudayaa ma isleedahay waxaa la soo Afjarayaa dagaalka Agagixisada meel kasto oo ay joogaan mase u maleyneysaa in doorashooyin la aadi doono su’aalahaasi waxaan u deyn donaa waqtiga, waqtiga ayaana sheegi doona.
Waa Qalinkii Qoraa Sare pro Ducaale Xaaji Nuur
← Turkey’s Erdoğan says S-400 will be delivered next month
Xasuuq wadareed foolxun Oo ka dhacay Magaalada Gaalkacyo →